काठमाडौँ उपत्यकामा अचानक देखियो यस्तो वस्तु, स्थानियहरु आश्चर्यचकित ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/काठमाडौँ उपत्यकामा अचानक देखियो यस्तो वस्तु, स्थानियहरु आश्चर्यचकित !
आज बिहानै काठमाडौँ उपत्यकामा तेजिलो वस्तु देखा परेको छ । आज विहान ठिक ५ बजेर ४० मिनेट जादाँ अचानक ललितपुर फाँटमा तेजिलो वस्तु उत्पत्ति भएको हो । यो वस्तु पहाडको फेदबाट उत्पन्न भई विस्तारै बेसीतर्फ झरेको थियो ।
तेजिलो वस्तु झन् झन् ठुलो आकार लिन थाल्यो । केही समयमा धपक्कै बलेर गायब भयो । तेजिलो वस्तु महालक्ष्मी नगरपालिकाको बिष्णुडोल नजिकै देखिएको हो । खुल्ला फाँटमा केही मिनेट यसले आफ्नो अस्त्वि देखएर गायब भयो ।
विहानै यस्तो वस्तु देखिएपछि देख्नेहरु आश्चर्यचकित भए ।कतिपयले यसलाई राँके भुत भने । कतिपयले हावामा कुनै ग्याँस उत्पत्ति हुँदा बहावसँगै बलेर सरेको बताए ।उक्त क्षेत्रमा विगतमा पनि यस्तै तेजिलो वस्तु उत्पत्ति हुने र गायब हुने गरेको छ । फेरि देखिएपछि यसबारे चासो बढेको छ ।
विश्वकै अनौठो जाति, जहाँ दिदीबहिनीसँग दाजुभाईको विवाह हुने गर्छ